India : Sakafo Indiàna tsara voatra atolotr’ireo sefo ao amin’ny Youtube · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2020 5:36 GMT
(Lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 18 Febroary 2014. Rohy mankany amina lahatsoratra amin'ny fiteny Hindi sy Anglisy no ato anaty lahatsoratra )
Ao amin'ny YouTube, mitombo laza ireo sefo mpahandro sakafo ao India sy erantany.
Tsy mijanona fotsiny ho anaty boky hainahandro intsony ny fangaro sy fomba fikarakarana, na koa ho an'ireo sefo efa goavana manana fandaharana manokana anaty fahitalavitra. Misy sefo indiàna anaty andian-taranaka vaovao mampiakatra ny rarakivinao amin'ny lazan-dry zareo ao amin'ny YouTube. Amin'ny fanalàna sarona ny hainahandro indiàna ary amin'ny fanomezana torohevitra mba hamoronana sakafo mampilendalenda, asisik'ireto lehilahy sy vehivavy manana talenta ireto ho any amin'ireo indiàna maro mitsidika azy ny faniriana handray ny fitaovana an-dakozian'izy ireny sy hanandrana karazana laro sy fikarakaràna sakafo mafilotra isankarazany ao an-dakoziany ihany.
Ndeha ary ho ampirimintsika ireo boky miresaka nahandro, fa omentsika toerana ry zareo sefo mpahandro ao amin'ny Youtube. Tsy misy ilain'ilay sefo tsy matianina intsony, afa-tsy ny miezaka samirery manandrana manakatra ny voalazan'ny torolàlana ambaran'ny fomba fahandroana iray rehefa miteny izy hoe “tokony tsy atao matevina loatra ny feta”. Azo atao manomboka eto ny mahita ny sefo mpahandro eo amperinasa mba hampiseho ny tena izy sy an-tsary ny atao hoe “tsy matevina loatra”.
Sanjay Thumma (fantatra kokoa amin'ny anarana hoe VahChef) no mpamorona ny tranonkala miresaka fahandroana sakafo vahrehvah.com. Nisokatra tamin'ny 2007, nitondra azy ho eny an-tampon'ireo kintan'ny hainahandro ao an-dakozia ny fantsony Youtube ivondronan'ireo fomba fahandro isankarazany.
Pikantsarin'ny VahChef, ilay fantsona Youtube an'i Sanjay Thumma
Rehefa nifandimby teny ny taona, lahatsary maherin'ny 1.100 fitarihan-dàlana no natolotry ny VahChef Sanjay tety anaty aterineto ho azon'ny rehetra trandrahana, samy fikarakaràna sakafo indiàna indrindra indrindra, ary sakafo iraisampirenena vitsivitsy. Hita ao amin'ny fantsony ihany koa amin'izao fotoana izao ireo mpanjohy miisa 243.985 ary efa nisy nijery in-159.266.645. Hita ihany koa ao amin'ny Facebook ny pejiny, mahavory “Tia” manodidina ny 164.405 eo. Manentana fandaharana iray momba ny fahandroana sakafo ao amin'ny fantsom-pahitalavitry ny faritra iray ao India ihany koa i Sanjay.
Marihan'ny Wandering Spoon , bilaogy momba ny hainahandro, fa :
Mahavelom-bolo ny mahita olona mampiseho sakafo tsara voatra mampitelin-drora arahana hafaliana tsy miafina, fanatontoloana tsy miolankolaka ary tsy misy ankosotra. Manampy ihany ny efa fitiavako ny hainahandro indiàna, saingy ny tonga dia nambabo ahy avy hatrany dia ny toerana mpampianatra noraisiny.
Ao anatin'ny lahatsary eto ambany, asehon'i VahChef Sanjay ny fomba fahandro akoho laroina dipoavatra sy “fenouil” :
Ny lakozian'i Manjula
Tao anivona ankohonana mpihinana zavamaitso no lehibe i Manjula Jain, tany avaratr'i India. Na dia nanambady sy nandeha nipetraka tany Etazonia aza izy tany amin'ny faramparan'ny andiantaona 60s tany ho any, nijanona hatrany ho mpihinana zavamaitso izy ny ny fianakaviany, nitahiry ny fombam-pivavahany “jaïnisme” [finoana hindoa]. Hatramin'ny 2006, mamoaka fomba fahandro ao amin'ny bilaoginy i Manjula no sady mamokatra lahatsary momba ny hainahandro ao amin'ny Youtube, manolotra ireo fomba fikarakaràna “tsotra sy mora atao” avy amin'ireo hainahandro tsy manampaharoa indiàna. Hita anatin'ireo fomba fikarakaràna atolony ihany koa ireo sakafo ho an'ny mpihinana zavamaniry sy tsy misy “giliotena” (gluten ).
Ny tranonkala sy ny bilaogin-tsakafon'i Manjula
Manana mpanjohy miisa 146.873 ny fantsona Youtube Lakozian'i Manjula, ary mahatratra 73.769.313 no nisy nijery. Manana “Tia” 260.833 ny pejiny Facebook. Vao haingana i Manjula no namoaka ny bokiny voalohany, “”Lakozian'i Manjula: Ny tsara indrindran'ny fihinanana zavamaniry indiàna, azo jifaina ao amin'ny Amazon.
Ao anatin'ity lahatsary eto ambany ity; asehon'i Manjula antsika ny fomba fikarakaràna mofo ovy matsiro, malaza eny amoron-dàlana ao Mumbai, India : Batata Vada na Aloo Bonda
Saingy tsy ireo lahatsary manome fomba fanomanana sakafo nisy fanehoankevitra amin'ny teny anglisy ihany no nahita fahombiazana. Taorian'ny nitsaharany tamin'ny asany andavanandro, tsy dia nahafantatra loatra izay ho ataony rehefa misotro ronono i Nisha Madhulika, vehivavy 55 taona avy ao Delhi, ka dia nitodika tany amin'ny fitiavany mahandro mba hisy zavatra handaniana fotoana. Nanomboka nametraka lahatsary momba ny sakafo izy, tety anaty aterineto, tamin'ny fiteny hindi narahany maribolana amin'ny teny anglisy ho an'ireo olona tsy miteny ny fiteniny. Miaraka amin'ireo lahatsary 800 mahery napetraka ho ety anaty aterineto, sy ireo fomba fikarakaràna sakafo marobe ao amin'ny tranonkalany amin'ny fiteny hindi (izay misy dika amin'ny fiteny anglisy), lasa olona fitanisa amin'ny resaka hainahandro i Nisha Madhulika.
nishamadhulika.com – ilay tranonkala amin'ny fiteny hindi manolotra fomba fikarakaràna sakafo indiàna ho an'ireo mpihinana zavamaniry
Ato anatin'ny lahatsary manaraka, tantarain'i Nisha ny làlana nodiaviny tany am-boalohany amin'ny maha-sefo mpahandro azy ao amin'ny Youtube
Hatramin'ny androany ny fantsona miresaka hainahandron'i Nisha Madhulika dia manana mpanjohy 114.339 ary in-33.236.034 nisy nijery. Ny pejiny Facebook indray nahazo “Tia” manodidina ny 40.000.
Ao anatin'ny lahatsary eto ambany, asehon'i Nisha Madhulika antsika ny fomba fanaovana ireo bolabolam-bary napoaka [mitovitovy amin'ny “Rice Krispies Treats” ihany, fa ny jaggery (siramamy tsy voadio) no nasolo ny “marshmallows”]
Anisan'ireo sefo mpahandro malaza any an-tokantrano ihany koa i Bhavna, mamoaka lahatsary momba ny fikarakaràna sakafo indiàna sy/na avy ao Azia atsimo sy ireo “fomba fikarakaràna sakafo mafampàna erantany, atolony miaraka aminà fanampin-tsiro indiàna “avoakany ao amin'ny fantsona Bhavna's Kitchen (manana mpanjohy 134 091 ary in-52.497.677 nisy nijery), sy ny tarik'i Hetal-Anuja miaraka amin'ny “fomba fanaony miandàlana sy mora ampiharina amin'ny resaka hainahandro avy ao Azia atsimo”, ao amin'ny tranonkala ShowMeTheCurry.com (manana mpanjohy 120.696 ary in-65.979.089 nisy nijery).
Pikantsarin'ny fantsona India Food Network ao amin'ny Youtube
Raha ny marina, mahomby tokoa ireo lahatsary taridàlana sy fampianarana fomba fahandro ao amin'ny Youtube ka nahatonga ny fihaonan'ireo andiana sefo mpahandro sy bilaogera vitsivitsy mpiresaka sakafo mba hamorona ao amin'ny Youtube ny India Food Network [Tambajotran'ny hainahandro ao India]. Araka ny famaritana natolotra ao amin'ny pejy Facebook-n'izy ireo :
Ny “India Food Network” dia taridalàna iray atolotra hitantana anao tsikelikely amin'ny fikarakaràna sakafo ao an-tokantrano, tsotra nefa matsiro. Hita ao ny nahandrom-paritra indiàna, ary hatramin'ireo sakafo malaza erantany, tanjonay ny hanamora ny fikarakaràna sakafo an-dakozia.
Araka izany, amin'ny manaraka rehefa te-hiketrika sakafo mba hampitolagaga ireo namana ianareo, aza boky miresaka nahandro intsony no sokafana. Midira Youtube dia avelao ho ireo sefo mpahandro malaza amin'izao vanimpotoana vaovao izao no hitantana anareo.
23 ora izayKanadà